[RASMI] dr.fone xidhmo - Android Lock saarista Screen ee PIN, Password, faraha & Qaabka
xidhmo dr.fone - Android Lock saarista Screen
Ka saar screen qufulka Android in 5 daqiiqo.
Ka saar noocyada qufulka 4 screen - hannaankii, PIN, password & faraha.
ka saar oo kaliya screen qufulka, ma xogta khasaare ah oo dhan.
No aqoonta casriga ah loo baahan yahay, qof walba waxa uu xamili karo.
Shaqeeyaan Samsung Galaxy S / Note / taxane Tab, iyo LG G2 / G3 / G4, iwm
arrinta ma aad u halmaanteen la sirta ah ee aad screen qufulka Android ama uun ka heli qalab gacan labaad ah oo aadan aqoon u habayn ama screen qufulka ee, this Android Lock saarista Screen aad u saamaxaaya in ay ka takhalusaan habayn ama aan la aqoon in 5 daqiiqo, oo ay ku jirto hannaankii, PIN, password iyo faraha. Wax alla wixii habayn ama aad doorato, waxaad ma waayi doono wixii xog ah oo ku saabsan qalab aad by u saareen la this Android Lock saarista Screen.
Qufulan aad Device Android?
Ka saar Screen Android Lock ee Xaaladaha kala duwan
Ilowday password ka dib u dhacna dheer ka hor
Helay gacan labaad qalab Android la screen qufulan
password waa la dhigay by kids ama dadka kale
screen xiran yahay ay sabab u tahay galaya password qalad ah, waayo, marar badan
ma geli karaan sirta ah ay sabab u tahay screen ka jabay
xaalado badan oo sidan oo kale.
Ka saar Screen Lock on Android
doonana idin tagsiin karo afar nooc oo qufulka screen: hannaankii, PIN, password & faraha
Ka saar Screen Android Lock la No Loss Data
Tani waxay ka saarida screen qufulka Android kaliya laga takhaluso screen aad qufulan ku saabsan qalabka Android. Ma bedeli doono ama waayi xog kasta oo ku saabsan.
Aad shaqee Samsung iyo LG Devices
Tani waxay ka saarida screen qufulka loogu talagalay Android shaqeeya weyn ugu qalabka Samsung iyo LG. Waxaad ka eegi kartaa liiska halkan .
Fududee si ay u isticmaalaan
Uma baahnid in aad si aad u yaqaaniin xirfadaha kombiyuutarka ama wax adag. Connect qalab aad oo ay maamulaan this saarista screen qufulka Android. Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u qabtaan mid ka mid click, iyo si fudud.
Tani waxay ka saarida screen qufulka loogu talagalay software Android gebi ahaanba la akhriyo keliya software. Waxaa sii haysan maayo, wax ka beddelo ama daadato xog kasta oo ku saabsan qalab aad ama file ah gurmad. Waxaan qaadan xogta shakhsiga ah iyo warsan dhab ah. Waxaad had iyo jeer tahay qofka keliya waxaa ka heli kartaa.
Ka saar 4 Noocyada Android Lock Screen
aan Loss Data
Tani saarista Screen Android Lock ka saari kara passcodes of hannaankii, PIN, password iyo faraha. All oo idinka mid ah qaban karaa. Waxaa weydiiyo ma aqoon casriga ah. Waxba ma ahan wixii aad password waa, in aadan lumin doonaa wixii xog ah oo ku saabsan qalabka Android aad. Currently, waxaa u shaqeeya ugu telefoonada Samsung iyo kiniiniyada. wata magac kale waxaa ugu dhaqsaha badan soo socda.
Ka saar screen aad qufulan 5 minites guriga gudahooda.
Waxaad tahay qofka keliya heli karaan xogta iyo xisaabtaada
No aqoonta casriga ah loo baahan yahay oo dhan.
Waxaad ma waayi doono wax on qalab aad.
1 GB ama ka badan
Shaqo wanaagsan on note Samsung, ka heli oo dhan waxa i baahan tahay, laakiin ay ku haysato dhibaato la mini S3
this u baahan tahay si xun! Awesome!
Waxaa \_ 'dhab s waxa aan u baahanahay. Waxaad badbaadiyey xogta iyo xalin aan dhibaato ... Great!
Awesome! u qalantaa.
Imtixaanka software ugu android, kaliya Wondershare ahaa awoodaan in ay sameeyaan shaqada dhibaato la'aan. Thanks!
9 Siyaabaha garab Screen Samsung Lock
Sida loo Unlock Samsung Galaxy S3
Maxaa la sameeyaa haddii aad joojiyay aad telefoon Android
Sida loo Unlock Android Phone aan PIN
Afar Siyaabaha Unlock / dhaaftaan Android Lock Qaabka
3 Siyaabaha la isu Unlock Samsung Galaxy S5
Sida loo Beddel Lock Waraaq-Screen on Android
Sida loo Tus Wi-Fi Password on Android